Khipha ku-internet izinga okusezingeni Organic 100% Skin Care Natural pure Rose Oil ifektri abakhiqizi | HaiRui
ikhwalithi ephezulu ye-Organic 100% Skin Care Yemvelo ehlanzekile yamafutha eRose
Intengo ye-FOB: Okuxoxisanayo
Min.Order Ubuningi: 1kg
Amandla Wokunikezela: 2000KG ngenyanga
IBHODLELA, IDRUM, Isitsha Sengilazi
Uketshezi oluphuzi ophuzi nophuzi ngaphezu kuka-20 ° c
I-Gravity ethile @ 20 ° c:
Inkomba Yokukhomba @ 20 ° c:
Ukuzungezisa okubonakalayo @ 20 ° c:
16% we-citronellol no-33% we-geraniol
I-1000 Kilogram / Amakhilogremu Ngenyanga
1 Net Wt. ka-50KGS / 180KGS ku-gallon GI Drums 2 Logo Yamakhasimende kanye ne-Sticker Design nePrinta 3 Special Alumiunm Bottle of Small Order qty 1kg, 2kg, 5kg
SHENZHEN / SHANGHAI, ECHINA
I-HaiRui Natural Rose Oil (i-Rose Otto Oil) i-CAS No. 8007-01-0
Ukubukeka Uketshezi oluphuzi ophuzi nophuzi ngaphezu kuka-20 ° c
I-Gravity ethile @ 20 ° c 0.848 ~ 0.880
Inkomba Yokukhomba @ 20 ° c 1.4520 ~ 1.4700
Ukuzungezisa okubonakalayo @ 20 ° c -5 ° ~ -1.8 °
Ukuncibilika encibilikayo ethanol
Okuqukethwe 16% we-citronellol no-33% we-geraniol
Amafutha eRose Yemvelo (i-Rose Otto Oil) ………………………………………………………………………
Amafutha kaRose, okusho ukuthi i-rose otto (i-attar yama-rose, i-attar yama-roses), yi- amafutha abalulekile kukhishwe kwifayili ye- amacembe ezinhlobonhlobo ze wavuka.
Ama-rose ottos akhishwa kuwo ziphuzo zazihluzwa umusi, ngenkathi kutholakala ama-rose isizinda se-solvent noma ukukhipha isikhutha se-carbon dioxide, ngokusetshenziswa ngokuphelele ngokuphelele ku- amakha.
Noma ngentengo yabo ephezulu nokufika kwe- synthesis organic, uwoyela wama-rose usengamafutha abalulekile asetshenziswa kakhulu ekwenzeni amakha.
Isicelo ……………………………………………………………………………………………………… ..
Amafutha eRose ngokwesiko asetshenziselwa ukuzola nokuphakamisa. Iyaphikisana nokuvuvukala, iyapholisa futhi iyapholisa, futhi ngenxa yalokho inenzuzo esikhumbeni esomile, esishisayo, esishisayo noma esirhalayo nakwezinye izimo eziningi zokuvuvukala, njenge-conjunctivitis (yize bekungaba amanzi asetshenzisiwe kunamafutha asetshenziselwa lokhu) .
Ngaphezu kwalokho, i-rose inhle kakhulu ngesibazi, elapha ama-capillaries aphukile nezinhlobo zesikhumba ezivuthiwe. Izakhiwo zikaRose zokupholisa nezokudambisa umzimba zinhle kakhulu ekwelapheni izimo ezihlobene nengcindezelo kubantu abadala nasezinganeni.
Uwoyela waseRose ukhonjisiwe nokuthi unezinto ezilwa namagciwane. Kwesinye isifundo se-laboratory uDamask rose wakhombisa umsebenzi wokulwa namagciwane ngokumeleneIzinhlobo zamagciwane eziyi-15.
KwiUcwaningo luka-2009kwamavolontiya anempilo angama-40, uwoyela we-rose ofakwe esikhunjeni wakhiqiza impendulo yokuphumula enkulu kunaleyo kawoyela we-placebo. Abantu abathole uwoyela wama-rose nabo behle kakhulu emazingeni okuphefumula nomfutho wegazi kunalabo abathola i-placebo.
Esikhathini esedluleisifundo sezilwane, eyanyatheliswa ngo-2004, kutholakala ukuhogela uwoyela wama-rose ukwehlisa ukukhathazeka eqenjini lamagundane.
Amajaqamba okuya esikhathini
Amafutha ama-rose asetshenzisiwe (ahlanganiswe namanye amafutha) nawo angasebenza ekunciphiseni amajaqamba okuya esikhathini, ngokusho kwe-Ucwaningo luka-2006 lwabafundi besifazane basekolishi abangama-67. Kulolu cwaningo, inhlanganisela equkethe ithonsi elilodwa le-rose, amaconsi amabili e-lavender, ithonsi elilodwa le-clary sage, ne-5 cc yamafutha e-alimondi isetshenziswe ngendlela yokubhucungwa esiswini.
Izimpawu zokuya esikhathini
Ngobaucwaningo lwango-2008 lwabesifazane abangama-52 abaya esikhathini, Abaphenyi banikeze uhhafu wabesifazane ukubhucungwa masonto onke ngamafutha abalulekile (kufaka phakathi u-lavender nama-jasmine ngaphezu kwamafutha we-rose and rose geranium) nohafu bengalashwa. Ngemuva kwamasonto ayisishiyagalombili, abesifazane abathole ukubhucungwa babika ukuthuthuka okukhulu kwezimpawu zokuya esikhathini (njengokushisa okushisayo) kunalabo abangazange babhucungwe.
Noma ngabe uyisebenzisela isimo esithile sempilo noma ngabe uyisebenzisela nje ngoba uthanda iphunga lezimbali elikhuthazayo, eliqhakazile nelingunaphakade, i-rose ingenye yamafutha ethu abaluleke kakhulu.
1. Mini oda 20G, 50G, 100G etholakalayo
2. Intengo yokuncintisana kanye nensizakalo enhle kakhulu emva kokuthengisa
3. Ukunikezwa kwefektri
4. Amafutha eRose Yemvelo
Imininingwane Khombisa …………………………………
Langaphambilini Khipha uwoyela obalulekile weMacadamia Nut olungele iSepha
Olandelayo: Isitshalo Khipha Ibhodlela Elincane Le-Glass Ukupakisha i-Chlorophyll powder
I-Organic Rose Amafutha
I-Rose Essential Oil
I-Rose Oil Yesikhumba
Amafutha Wamafutha Ase-Rose Rose
Imithi yendabuko yamaShayina i-100% i-angelica emsulwa ...
Factory intengo ukudla grade yezimonyo geranium esse ...
spice yemvelo Amafutha abalulekile ka-c ...
Amafutha Abalulekile we-Natural Zedoary Turmeric Oil